उपत्यकाका सीडीओहरुको बैठक बस्दै — Imandarmedia.com
१बालबालिकामा कोभिड सङ्क्रमण बढ्दो, जोगाउन चिकित्सकको यस्तो छ सुझाव
२प्रधानमन्त्रीले बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा को को उपस्थिति भए ?
३हाल ५० लाख डोज कोभिसिल्ड खरिद गर्ने अवस्था छैन: स्वास्थ्य मन्त्रालय
४चीनको अनियन्त्रित रकेट पृथ्वीमा खस्ने खतरा,बिस्वभर त्रास
५प्रहरी र तस्क’रबीच गो’ली हा’नाहा’न, कम्तीमा २५ जनाको मृ’त्यु
६के भारतमा कोरोना भाइरसको महामारी अब ओरालो लाग्न लागेको हो?
७राष्ट्रियसभा सदस्यमा बादल सहित तीन जनाको उम्मेदवारी
८रसियन स्पुतनिक खोप ल्याउन नेपाल सरकारले कसलाई दियो अनुमति
९निषेधाज्ञामा बढी भाडा लिनेह ३ जना पक्राउ
१०राष्ट्रपतिलाई माधव नेपालले दिए यस्तो जवाफ
११गण्डकीमा कोरोना संक्रमणबाट थप ४ जनाको मृत्यु
१२बिल गेट्सले डिभोर्स गरेकी श्रीमती मेलिन्डाको नाममा ट्रान्सफर गरे यति धेरै सम्पति र खाेले यस्ताे बेग्लै रहस्य
उपत्यकाका सीडीओहरुको बैठक बस्दै
काठमाडौँ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणबारे थप निर्णय गर्नका लागि मंगलबार उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हरुको बैठक बस्दैछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा बस्ने बैठकमा पहिलो चरणमा जारी गरिएको निषेधाज्ञाको समीक्षाका साथै कोरोना नियन्त्रणका सम्बन्धमा थप निर्णय लिइने बताइएको छ ।
यसो त निषेधाज्ञाका बीच पनि मानिसहरुको आवातजावत र यातायातका साधनको भीडभाड सडकमा देखिएको भन्दै यसलाई थप कडाइ गर्ने तयारी भएको छ । यस्तै हाल बेलुका र बिहान दुई समय खाद्य पसर र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरु सञ्चालनको अनुमति दिइएकामा अब बिहानको समयमा मात्रै सञ्चालन गर्न दिनेगरी निर्णय हुने बताइएको छ ।
सरकारले आन्तरिक र अन्तराष्ट्रिय उडान सञ्चालनमा रोक लगाइसकेको सन्दर्भमा उपत्यका भित्रिने नाकाहरुमा पनि कडाइ गर्नेगरी छलफल भएको छ । यी सबै विषयमा आजको बैठकले निर्णय लिने काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।
राष्ट्रपतिलाई माधव नेपालले दिए यस्तो जवाफ
नगरपालिकाले गर्यो यति ठुलो निर्णय, संक्रमितलाई निःशुल्क उपचार, एम्बुलेन्स फ्री
सबै देशका उडान बन्द, भारतसँग मात्रै किन खुल्ला ? यस्तो रहेछ कारण
माधव नेपालका तीन ‘मुभ’ जसले ओलीको बेचैनी बढयो
प्रतिनिधिसभा बैठकको ४ दिन अगावै,सांसदलाई तोकियो यस्तो मापदण्ड
राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता गरिदै